Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Ny zotram-piaramanidina mandeha mandritra ny folo taona anaty mainty
Ny International Air Transport Association (IATA) dia maminavina ny harinkarenan'orinasa manerantany ho $ 35.5 miliara amin'ny taona 2019, somary alohan'ilay $ 32.3 miliara tombony azo amin'ny taona 2018 (nohavaozina tamin'ny vinavina $ 33.8 miliara tamin'ny volana Jona). Ny hevi-dehibe amin'ny fampisehoana 2019 dia misy:
• Ny fiverenana amin'ny renivohitra ampanjariam-bola dia andrasana ho 8.6% (tsy miova manomboka amin'ny 2018)
• Ny taha amin'ny tombony azo aorinan'ny hetra aorian'ny hetra dia antenaina fa 4.0% (raha oharina amin'ny 3.9% amin'ny taona 2018)
• Ny vola miditra amin'ny indostrialy amin'ny ankapobeny dia antenaina hahatratra $ 885 miliara (+ 7.7% amin'ny $ 821 miliara amin'ny taona 2018)
• Ny isan'ny mpandeha dia antenaina hahatratra 4.59 miliara (hatramin'ny 4.34 miliara amin'ny 2018)
• Ny taonina entin'ny enta-mavesatra dia antenaina hahatratra 65.9 tapitrisa (hatramin'ny 63.7 tapitrisa amin'ny 2018)
• Ny fitomboan'ny fangatahana miadana ho an'ny fifamoivoizana ho an'ny mpandeha (+ 6.0% amin'ny taona 2019, + 6.5% amin'ny taona 2018) ary ny entana (+ 3.7% amin'ny taona 2019, + 4.1% amin'ny taona 2018)
• Tombony azo isaky ny mpandeha $ 7.75 ($ 7.45 amin'ny 2018)
Ny vidin-tsolika ambany sy ny matanjaka, na dia miadana kokoa aza, ny fitomboan'ny harinkarena (+ 3.1%) dia manitatra ny tombom-barotra ho an'ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an-habakabaka manerantany, taorian'ny nanenjehana ny tombom-barotra noho ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny taona 2018. Antenaina fa ho taona faha-folo ahazoana tombony ny 2019 ary ny taona fahadimy nisesy izay natolotry ny kaompaniam-pitaterana vola miverina mihoatra ny vidin'ny kapitalin'ny indostria, miteraka sandam-bola ho an'ireo mpampiasa vola.
"Nanantena izahay fa hampihena ny tombom-barotra amin'ny taona 2019 ny fiakaran'ny vidim-piainana. Saingy ny fihenan'ny vidin-tsolika sy ny vinavina ny fitomboan'ny harinkarena faobe dia nanome buffer. Ka dia manantena am-pitandremana izahay fa hitohy mandritra ny herintaona farafahakeliny ny fihariana famoronana sanda matanjaka ho an'ny mpampiasa vola. Saingy misy ny loza aterak'izany satria mbola miovaova ny tontolo toekarena sy politika, "hoy i Alexandre de Juniac, Tale jeneraly sy tale jeneralin'ny IATA.
Performance Drivers amin'ny taona 2019
Fisondrotana ara-toekarena: vinavinaina hitombo 3.1% ny harin-karena faobe amin'ny taona 2019 (somary ambany noho ny fanitarana 3.2% amin'ny 2018). Ity fitomboana miadana fa mbola matanjaka ity dia mpamily fitadiavam-bola maharitra. Misy loza mitatao lehibe amin'ny fitomboan'ny ady ara-barotra sy ny tsy fahazoana antoka ara-politika toy ny amin'ny BREXIT, fa ny fiheverana marimaritra iraisana dia ireo tranga ireo fa tsy hampihemotra ny tosika miabo amin'ny fitomboan'ny politika ara-bola sy ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola amin'ny orinasa lehibe.
Vidin-tsolika: ny fomba fijerin'ny indostria 2019 dia mifototra amin'ny vidin'ny solika antenaina $ 65 / barila (Brent) izay ambany noho ny 73 $ / barila (Brent) niainana tamin'ny taona 2018, taorian'ny fiakaran'ny vokatra amerikanina sy ny fitomboan'ny fanatobiana solika. Ity dia fanamaivanana tsara ho an'ireo kaompaniam-pitaterana izay nahita ny vidin'ny solika jet, na dia teo aza ny fihenan-tsasatra noho ny fiatraikan'ny fepetra iainana ambany-solifara nataon'ny sehatra an-dranomasina izay nampitombo ny tinady ny gazoala (izay mifaninana amin'ny solika jet ho an'ny fahaizan'ny milina fanodinana) . Na eo aza izany, ny vidin'ny solika jet dia antenaina ho $ 81.3 / barila amin'ny taona 2019, ambany noho ny salan'isa 87.6 / barila ho an'ny taona 2018). Hihemotra ny fiatraikany feno amin'ity fihenam-bidy ity noho ny habetsaky ny fefy ao amin'ny faritra sasany. Ny solika dia antenaina ho 24.2% amin'ny saran'ny fiasan'ny zotram-piaramanidina (fiakarana hatramin'ny 23.5% vinavina ho an'ny 2018).
Asa: ny asa manontolo ataon'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia antenaina hahatratra 2.9 tapitrisa amin'ny taona 2019, hiakatra 2.2% amin'ny taona 2018. Miakatra ihany koa ny karama, hita taratra ny fihenan'ny tsenan'asan'ny asa, ary antenaina fa hiakatra 2.1% ny vidin'ny asa an-trano amin'ny taona 2019 aorian'ny vanim-potoana maharitra. Mihamokatra kokoa ny asan'ny sidina. Amin'ny taona 2019 dia manantena izahay fa hitombo 2.9% ka hatramin'ny 535,000 kilometatra / mpiasa misy ny vokatra.
Mpandeha: ny fivezivezena amin'ny mpandeha (RPKs) dia antenaina hitombo 6% amin'ny taona 2019, izay hihoatra ny fisondrotana tombana (ASKs) 5.8%, ary hijanona eo ambonin'ny taha mitombo 20-taona. Ity kosa dia hampitombo ny singa mavesatra ary hanohana ny fiakarana 1.4% amin'ny vokatra (miverina amin'ny ampahany ny fianjerana 0.9% niainana tamin'ny taona 2018). Ny vola miditra amin'ny mpandeha, ankoatry ny fanampiana dia antenaina hahatratra $ 606 miliara (tafakatra $ 564 miliara amin'ny taona 2018).
Entana: ny fiakarana 3.7% isan-taona amin'ny taonina ho an'ny entana ho 65.9 tapitrisa taonina no haingana indrindra hatramin'ny 2016, taratry ny tontolon'ny varotra manerantany voan'ny fiakaran'ny fiarovana. Ny vokatra kargno dia antenaina hitombo 2.0%. Izany dia ambany lavitra noho ny fitomboan'ny vokatra 10% miavaka amin'ny taona 2018. Manohy ny fanamafisana ny orinasam-pitaterana vao haingana anefa izy io, satria ambany ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny vola miditra amin'ny ankapobeny amin'ny karama dia antenaina hahatratra $ 116.1 miliara (hatramin'ny $ 109.8 miliara amin'ny taona 2018).
Ny faritra rehetra, ankoatran'i Afrika, dia antenaina hitatitra tombony amin'ny taona 2018 sy 2019. Ireo mpitatitra any Amerika Avaratra dia mitohy mitarika amin'ny fahombiazana ara-bola, mitaky ny antsasaky ny tombom-bidin'ny indostria. Ny fanatanterahana ara-bola dia antenaina hivoatra raha oharina amin'ny taona 2018 any amin'ny faritra rehetra afa-tsy ny any Eropa, izay nahemotra ny fanatsarana noho ny haavon'ny hedging solika.
Ireo mpitatitra amerikana avaratra dia antenaina hanome ny fahombiazana ara-bola matanjaka indrindra amin'ny taona 2019 miaraka amin'ny tombony 16.6 miliara dolara (hatramin'ny $ 14.7 miliara amin'ny taona 2018). Izany dia marin-kaonty 6.0% ary maneho tombony amin'ny 16.77 $ isaky ny mpandeha, izay fanatsarana marihina enina taona monja talohan'izay. Ny maridrefy dia miakatra manomboka amin'ny 2018 (5.7%) satria ny haavon'ny hedging solika ambany dia mamela ny fihenan'ny vidin-tsolika avy hatrany. Ny tombom-barotra dia mihombo noho ny antony avo lenta sy ny vola miditra.
Ireo mpitatitra eoropeana dia antenaina hitatitra tombony $ 7.4 miliara amin'ny taona 2019 (ambany kely raha 7.5 miliara dolara amin'ny 2018). Ny tombom-barotra azo andrasana isaky ny mpandeha $ 6.40 (3.4% net margin) dia iray ampahatelon'ny tombony azon'ny mpandeha antenaina vokarin'ny mpitatitra amerikana avaratra. Ny fifaninanana mahery vaika dia ny fitazonana ny vokatra ambany ary ny fandoavam-bola avo lenta. Ny faritra dia tafarina tamin'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny 2016. Saingy tamin'ny taona 2018 dia niaritra $ 2 miliara fanampiny izy io noho ny fiakarana 61% amin'ny minitra fanemorana ateraky ny tsy fahampian'ny fifehezana ny fifamoivoizana. Raha mijery ny taona 2019, ny haavon'ny fefy avo ao amin'ny faritra dia midika fa hihemotra ny fiatraikany tsara amin'ny vidin'ny solika ambany.
Ireo mpitatitra any Azia-Pasifika dia andrasana hitatitra tombony $ 10.4 miliara amin'ny taona 2019 (tafakatra $ 9.6 miliara amin'ny taona 2018). Ny tombom-barotra azo antoka isaky ny mpandeha dia antenaina ho $ 6.15 (3.8% net margin). Ity dia faritra misy tsena marobe, ny sasany amin'izy ireo dia mahita fitomboana matanjaka avy amin'ireo mpiditra vaovao ao amin'ny LCC raha ny hafa kosa miankina amin'ny entana any ivelany avy amin'ny ivon-toeram-pamokarana lehibe. Ny fitomboan'ny vola miditra amin'ny kargo dia nihena noho ny fahombiazan'ny 2017 fa mijanona ho tsara hatrany amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any amin'ny faritra. Ny sandan'ny vidin-tsolika ambany, ny haavon'ny hedging misy solika ary ny fitomboan'ny harinkarena matanjaka eo amin'ny faritra dia manohana tombony amin'ny taona 2019 amin'ity faritra ity.
Ireo mpitatitra any Moyen Orient dia antenaina hitatitra tombony 800 tapitrisa $ amin'ny taona 2019 (tafakatra 600 tapitrisa dolara malemy kokoa amin'ny 2018). Ny tombom-barotra azo andrasana isaky ny mpandeha dia $ 3.33 (1.2% net margin). Niharan'ny fanamby ny faritra noho ny fiatraikan'ny fidiram-bolan'ny solika teo aloha, ny fifanolanana, ny fifaninanana avy amin'ny 'super-connectors' hafa ary ny fihemorana amin'ny maodely manokana, ka nahatonga ny fihenan'ny fitomboan'ny fahaizany (taorian'ny folo taona nitomboan'ny isa roa heny , ny fitomboan'ny fahaizan'ny mpandeha dia nihena ho 6.7% tamin'ny 2017). Notaterin'ny faritra 4.7% ny fitomboan'ny fahafaha-miasa amin'ny taona 2018 ary antenaina hihena 4.1% amin'ny taona 2019, izay miaraka amin'ny fandaminana indray dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Ireo mpitatitra amerikanina latina dia antenaina hitatitra tombony 700 tapitrisa $ amin'ny taona 2019 (tafakatra 400 tapitrisa dolara amin'ny 2018). Ny tombom-barotra azo andrasana isaky ny mpandeha dia $ 2.14 (1.6% net margin). Miala moramora ihany ny toekarena eo amin'ny tsena eo an-toerana, satria mivoaka avy any amin'ny toe-karena ny toekaren'i Brezila, saingy niatrika olana vaovao i Arzantina. Ny tanjaky ny dolara amerikana dia nanampy ny fanambin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny vidim-bola eo an-toerana ny fidiran'ny US $ toa ny solika sy ny fiaramanidina, saingy ny fanovana indray sy ny fiaraha-miombon'antoka lehibe dia manatsara ny zava-bita.
Ireo mpitatitra afrikanina dia antenaina hitatitra fatiantoka 300 tapitrisa $ amin'ny taona 2019 (somary nohatsaraina tamin'ny fatiantoka 400 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2018). Ny fatiantoka azo antoka isaky ny mpandeha dia $ 3.51 (-2.1% net net). Izany no mahatonga an'i Afrika ho faritra malemy indrindra, toy ny efa-taona lasa izay. Mihatsara ny fahombiazana, saingy miadana ihany. Tombanana ho tapaka ny fatiantoka amin'ny taona 2019 satria mihena ny vidin-tsolika. Ny faritra dia mahazo tombony amin'ny vokatra avo kokoa noho ny salan'isa sy ny vidin'ny fandidiana ambany kokoa amin'ny sokajy sasany. Na izany aza, vitsy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao amin'ny faritra no afaka mahatratra anton-javatra ampy hamoahana tombony.
Ny fangatahan'ny mpandeha isaky ny faritra
Amerika Avaratra 5.0 4.5 4.8 4.3
Eoropa 6.4 5.5 5.7 6.1
Moyen Orient 4.6 5.5 4.7 4.1
Amerika Latina 6.0 6.0 6.5 5.9
Fandraisana anjara ara-toekarena amin'ny fitaterana an'habakabaka
Ny tondro sasany lehibe amin'ny tombontsoa azo avy amin'ny fitomboan'ny fifandraisana eran-tany dia:
• Ny saran'ny sidina fiverenan'ny salan'isa amin'ny taona 2019 (alohan'ny hampiakarana vola sy haba) dia $ 324 (dolara 2018), izay 61% ambanin'ny taona 1998 aorian'ny fanitsiana ny fiakaran'ny vidim-piainana.
• Ny salan'isa entin'ny rivotra amin'ny taona 2019 dia antenaina ho $ 1.86 / kg (dolara 2018) izay latsaka 62% amin'ny haavon'ny 1998.
• Ny isan'ireo mpivady tanàn-dehibe tsy manam-paharoa tantanan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka dia tombanana hitombo ho 21,332 amin'ny taona 2018 (tafakatra 1,300 20,032 ny 2017 amin'ny 1998), ary mihoatra ny avo roa heny amin'ny XNUMX.
• Ny fandaniana eran-tany ataon'ny mpanjifa sy ny orinasa amin'ny fitaterana an'habakabaka dia antenaina hahatratra $ 919 miliara amin'ny taona 2019, hiakatra 7.6% amin'ny 2018 ary mitovy amin'ny 1.0% amin'ny harin-karena faobe global.
• Ny Airlines dia antenaina hanome vola $ 136 miliara amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny fidiram-bola amin'ny taona 2019 (fiakarana 5.8% amin'ny taona 2018).
“Ny fivahinianana an'habakabaka dia tsy toy ny mpivarotra velively. Tsy ny saran-dalan'ny ambany ihany no ambany, ny safidy ho an'ny mpandeha dia manitatra. Rohy mivantana 1,300 2018 eo ho eo eo anelanelan'ny tanàna no nosokafana tamin'ny taona 250. Ary dia an-tongotra 2018 tapitrisa ny sidina an'habakabaka nitranga tamin'ny taona 2017 noho ny tamin'ny taona XNUMX, "hoy i de Juniac.